Domain Name Kutsvaga | Martech Zone
Nzira yekutenga Sei Domain Name
Muvhuro, March 29, 2021 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uri kuyedza kutsvaga zita rezita rekumaka wega, bhizinesi rako, zvigadzirwa zvako, kana masevhisi ako, Namecheap inopa kutsvaga kukuru kwekutsvaga imwe:
Tsvaga domeini kutanga pa $ 0.88
dzinofambiswa ne Namecheap
Matipi Ekusarudza A Domain Name
Heano maonero angu akasarudzika pakusarudza zita rezita:
Ipfupi zviri nani - ipfupi dura rako, rinonyanya kuyeukwa uye zviri nyore kunyora saka edza kuenda nedura dura. Nehurombo, mazhinji madomeni ari pasi pevatanhatu mavara akareba akachengetwa kare. Kana iwe usingakwanise kuwana rimwe chete, rine zita pfupi, ini ndaizoedza kuita kuti huwandu hwemashiripiti nemazwi zvisashome… zvakare, kuyedza kuramba zvisingakanganwike. Semuenzaniso, Highbridge yakatorwa pamatanho ese epamusoro-soro, asi isu taive femu yekubvunza saka ndakakwanisa kutenga zvese zviri zviviri Highbridgekubvunza uye highbridgevanachipangamazano… mazita edomain akareba nemazwi akawanda, asi haakanganwike nekuti pane mazwi maviri chete.
TLDs dzakasiyana dzinogamuchirwa - Maitiro anoramba achichinja zvine chekuita nevashandisi veInternet uye mashandisiro avo emazita ezita. Pandakanhonga .zone top-level domain (TLD), vamwe vanhu vakandikurudzira kuti ndichenjere… kuti vanhu vazhinji vangangovimba neiyo TLD uye vafunge kuti ndanga ndiri rudzi rwesaiti yakaipa. Ndakaisarudza nekuti ini ndaida martech sedunhu, asi mamwe maTLD ese akange atotorwa. Mukufamba kwenguva, ndinofunga kwaive kufamba kukuru uye traffic yangu iri kumusoro saka yaive yakakodzera njodzi. Ingo gara waziva kuti semumwe munhu anonyora duraini pasina TLD, pane renji kurongeka kwekuyedza… kana ini ndikanyora martech ndikarova kupinda, iyo .com ichave yekutanga kuyedza.
Dzivisa hyphens - dzivisa hyphens paunenge uchitenga zita rezita ... kwete nekuti hazvina kunaka asi nekuti vanhu vanozvikanganwa. Vachagara vachinyora mudura rako vasina ivo uye vangangosvika kuvanhu vasiri ivo.
Keywords - kune musanganiswa wakasiyana uyo unogona kuita zvine musoro kubhizinesi rako:
nzvimbo - Kana bhizinesi rako richigara riine varidzi vemunharaunda uye richishandiswa, kushandisa zita reguta rako muzita inogona kunge iri nzira huru yekusiyanisa dura rako kubva kumakwikwi ako.
muchiso - Zvigadzirwa zvinogara zvichishandiswa kushandisa nekuti zvinowanzo kuve zvakasarudzika uye hazvigone kutotorwa.
Zvepamusoro - Misoro ndeimwe nzira huru yekuzvitsauranisa, kunyangwe uine rakasimba brand. Ndine yangu yakati wandei misoro yemazita ezita remazano eprojekiti yepamberi.
mutauro - Kana izwi reChirungu rikatorwa, edza kushandisa mimwe mitauro. Uchishandisa izwi reFrench kana reSpanish muzita rako rezita rinogona kuwedzera pizazz kune yako bhizimusi rese rekumaka.
Ko Kana Domain Yako Ikatorwa?
Kutenga kumusoro uye kutengesa mazita echizinda ibhizimusi rinobhadhara asi ini handifunge kuti iri rakakura rezvenguva refu kudyara. Sezvo maTLD achiwedzera uye achiwanika, mukana wekutenga dura diki pane itsva TLD inova nani uye iri nani. Mukutendeseka kose, ini handitombokoshesa mamwe madomaini angu sezvandaimboita uye ndaivasiya vachienda nemari yemadhora mazuva ano.
Nekudaro, kana iwe uri bhizinesi rinoshingirira nezve kutenga dura diki rakatotorwa, mazhinji ari kukwikwidza nekutengesa. Zano rangu ndere kungova nemoyo murefu uye usapenga zvakanyanya nezvako. Ini ndakataurirana nezvekutengwa kwenzvimbo dzinoverengeka dzemabhizimusi mahombe aisada kuzivikanwa ndikaawana iwo chikamu chemutengo waibvunzwa nemutengesi. Ini zvakare ndinogara ndichitarisa kuti ndione kana magwara enharaunda aripo kwavari pamwe nekuchengetedza. Kana iwe uchikwanisa kutora yako Twitter, Instagram, Facebook, uye mamwe mazita ezvemagariro kuenderana neyako domain, ndiyo nzira yakanaka yekuchengetedza inoenderana brand!
Kuzivisa: Widget iyi inoshandisa yangu yakabatana ID ye Namecheap.
Shandura: Zvikonzero zvina zvekusashandisa YouTube Vhidhiyo Inosimbisa Pane Rako Bhizinesi Webhusaiti
Kushambadzira Maitiro: Kukwira kwaMumiriri uye Musiki Era